इरेक्टाइल डिसफंक्शन डाक्टर कसरी पत्ता लगाउने र के आशा गर्ने - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
चेकआउट घरपालुवा जनावर कम्पनी कल्याण समुदाय, कल्याण कम्पनी, समाचार समाचार, कल्याण समुदाय कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> इरेक्टाइल डिसफंक्शन डाक्टर कसरी पत्ता लगाउने र के आशा गर्ने
इरेक्टाइल डिसफंक्शन डाक्टर कसरी पत्ता लगाउने र के आशा गर्ने
यदि तपाईं इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) को अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले कुन डाक्टरलाई फोन गर्नु पर्ने हो भनेर तपाईं सोचमा हुनुहुन्छ। सुरू गर्नको लागि राम्रो ठाउँ तपाईंको प्राथमिक हेरचाह चिकित्सकको साथ हो। तपाईंको विशिष्ट स्वास्थ्य चिन्ताको आधारमा उनीहरूले तपाईंलाई पुरुषहरूको स्वास्थ्य वा यूरोलजी (यूरोलॉजिस्ट), वा हर्मोन विशेषज्ञ (एन्डोक्राइनोलजिस्ट) मा विशेषज्ञ पठाउन सक्छन्।
त्यसोभए इरेक्टाइल डिसफंक्शन भनेको के हो?
इरेक्टाइल डिसफंक्शन एउटा धेरै सामान्य अवस्था हो जुन प्रत्येक वर्ष million मिलियन अमेरिकीहरू अनुभव गर्दछन्। ईडी, अन्यथा नपुंसकता भनेर चिनिन्छ, जब एक व्यक्ति एक दृढ इरेक्शन प्राप्त गर्न वा कायम राख्न संघर्ष गर्दछ।
यो प्राय: स्व-निदान गर्न सकिन्छ, लक्षणसहित:
कहिलेकाँही तपाई एकपटक यौन सम्पर्क राख्न चाहानुहुन्न, ईरेक्शन प्राप्त गर्न सक्षम हुँदै
एक निर्माण प्राप्त गर्न सक्षम हुँदैछ, तर यसलाई लामो समयसम्म सेक्सको लागि राख्नको लागि असक्षम
कुनै पनि समयमा एक निर्माण प्राप्त गर्न असक्षम
त्यो भन्यो, धेरै पुरुष पहिचान गर्न चिकित्सा सल्लाह खोज्छन् अन्तर्निहित कारण तिनीहरूको इरेक्टाइल डिसफंक्शनको, जसले उनीहरूलाई सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार सुरू गर्न अनुमति दिन्छ।
यौन स्वास्थ्य जटिल व्यापार हो, मांसपेशिहरु, तंत्रिका, हर्मोनहरु, रक्त वाहिकाहरु, र मस्तिष्क संलग्न। यसको मतलव यो कारण सहित विभिन्न कारकहरूद्वारा हुन सक्छ:
चिकित्सा अवस्था, जस्तै मुटु रोग, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, वा उच्च रक्तचाप
मनोवैज्ञानिक मुद्दाहरू, जस्तै तनाव, चिन्ता, र उदासीनता
जीवनशैली विकल्पहरू, मोटोपना, अत्यधिक रक्सी, धूम्रपान, अवैध लागूपदार्थको प्रयोग गरेर
एन्टिडिप्रेसन्ट्स, एन्टिहिस्टामाइन्स, र बीटा ब्लकरहरू जस्ता औषधीहरू केहि थोरै औषधियाहरू हुन् जुन ईरेक्टाइल डिसफंक्शन हुन सक्छ
एउटा सामान्य मिथक हो कि उमेरले ED निम्त्याउँछ। उमेर, तथापि, छैन कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तर अवस्था अधिक पाको पुरुषहरूमा बढी सामान्य हुन्छ। त्योले भन्यो, तपाईंको उमेरको कुनै फरक पर्दैन, तपाईं इरेक्टाइल प्रकार्यका साथ मुद्दाहरूको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
भाग्यवस, अधिकांश ईडी केसहरू उपचार योग्य र उपचार योग्य छन्। यद्यपि तपाईंको विशेष केस पूर्ण रूपमा ठीक गर्न सकिएन, त्यहाँ लक्षणहरू कम गर्न धेरै प्रभावकारी उपचार विकल्पहरू छन् ताकि तपाईं स्वस्थ सेक्स ड्राइभको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
इरेक्टाइल डिसफंक्शनमा कुन डाक्टरले मद्दत गर्न सक्छ?
तपाईंको प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक, एक यूरोलोजिस्ट, वा एन्डोक्रिनोलॉजिष्ट सबै इरेक्टाइल डिसफंक्शनको निदान गर्न र उपचार गर्न सक्षम छन्। यद्यपि उनीहरूको विशेषज्ञताको क्षेत्रहरू फरक छन्, तिनीहरू सबैले शारीरिक परीक्षण गर्नेछन्, र तपाईंको मेडिकल ईतिहासको बारेमा प्रश्नहरू सोध्नेछन्।
प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक
प्राथमिक हेरचाह चिकित्सकहरु (PCPs) लाई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा पहिलो प्रवेश बिन्दु मानिन्छ। तिनीहरू सर्तहरूको एक विस्तृत श्रृंखला को निदान गर्न प्रशिक्षित छन्, त्यसैले तिनीहरू एक राम्रो ठाउँ हो शुरू गर्न जब तपाईं कुनै स्वास्थ्य चिन्ता छ।
तपाईंको पीसीपी सम्भवतः तपाईंको लक्षण र मेडिकल ईतिहासको बारेमा केहि प्रश्नहरू सोध्नेछ। यी प्रश्नहरूको केहि उदाहरणहरू हुन् जुन उनीहरूले सोध्न सक्छन्:
के तपाई हाल कुनै औषधि वा सप्लीमेन्ट लिदै हुनुहुन्छ? यदि हो भने, तिनीहरू के हुन्?
के तपाईं अवैध औषधिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ?
के तपाईलाई कुनै पुरानो बिमारी छ?
के तपाईं रक्सी पिउनुहुन्छ वा धुम्रपान गर्नुहुन्छ?
तपाइँ कति पटक व्यायाम गर्नुहुन्छ?
तपाईंको निर्माणका साथ कठिनाई वर्णन गर्नुहोस्।
तिनीहरूले सम्भवतः शारीरिक परीक्षा पनि गर्नेछन्। डाक्टरहरूले तपाईको हृदय सुन्न र रक्तचाप परीक्षण गर्नका लागि यो सामान्य छ, साथै तपाईको लि ,्ग, अण्डकोष, र असामान्यताहरूको लागि प्रणाम गर्दछ।
रगत र मूत्र परीक्षणहरू प्राय: तपाईको कोलेस्ट्रॉल, रगतमा चिनी, ट्राइग्लिसराइड्स, टेस्टोस्टेरोन, इत्यादि जाँच गर्न प्रयोग गरिन्छ।
तपाईंको पीसीपी तपाईंको ED को लागी औषधी दिन सक्छ वा आवश्यक परेमा विशेषज्ञलाई पठाउन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँको निदान वा उपचारको लागि सहयोग आवश्यक छ भने तपाइँको पीसीपीले तपाइँलाई यूरोलोजिस्टमा पठाउन सक्छ।
एक यूरोलोजिस्ट एक डाक्टर हो जसले मूत्र पथ र पुरुष प्रजनन प्रणालीमा विशेषज्ञता दिन्छ। उनीहरूले यौन दुर्बलताको मात्र उपचार गर्दैनन्, तर उनीहरूले मृगौला, मूत्राशय, प्रोस्टेट, मूत्रमार्ग, र श्रोणि मांसपेशीहरूका पनि क्यान्सर किडनी ढु stones्गा, असंयम, र संक्रमण सहितको रोगहरूको उपचार गर्दछन्।
यद्यपि तपाईको यूरोलोजिस्टले तपाईको पीसीपीको रूपमा उहि प्रश्नहरू सोध्ने छ, यूरलोजिस्टले जटिल इरेक्शन समस्याहरूको उपचार गर्न अझ गहन प्रशिक्षण पाएको छ, जसमा शल्यक्रिया चाहिन्छ। तपाईको यौन स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गरिरहेको जस्तो असुविधा महसुस हुन सक्छ, तपाईको डाक्टरसँग सकेसम्म खुला र पारदर्शी हुनु राम्रो हो ताकि ऊ वा उनी अझ राम्रो सहयोग गर्न सक्दछन्।
जब तपाईं डाक्टरलाई भेट्न जानुहुन्छ, तपाईं चाहानु सक्नुहुन्छ केहि प्रश्नहरू तयार गर्नुहोस् , जस्तै:
के यो अवस्था अस्थायी हो?
उपचार विकल्पहरू के-के हुन्?
कतिन्जेल मैले सुधार देखुन्?
के त्यहाँ उपचार गर्न कुनै साइड इफेक्ट छन्?
तपाईंको पीसीपीले सञ्चालन गर्ने परीक्षणहरूको अतिरिक्त, तपाईंको यूरोलोजिस्टले थप परीक्षणहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छ जस्तै:
एक penile अल्ट्रासाउन्ड
हार्मोन स्तरको लागि रगत परीक्षण
रातारहित Penile tumecence (NPT)।
NPT एक रातको परीक्षण हो कि यदि तपाईं सुताईरहेको बेला (धेरै सामान्य र सामान्य) अनैच्छिक निर्माणहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने मोनिटर गर्न सेन्सरहरू प्रयोग गर्दछ।
यूरोलोजिष्टले प्रोस्टेटको कुनै विकृति छ कि भनेर निर्धारण गर्न डिजिटल रेक्टल परीक्षा पनि गर्न सक्छ। चिन्ता नलिनुहोस्, यी सामान्यतया केवल हल्का असुविधाजनक हुन्छन्।
एक यूरोलोजिस्टले तपाईको ED लाई उपचार गर्न औषधी दिन सक्छ, साथै शल्य चिकित्सा र इम्प्लान्ट जस्ता अन्य उपचार पनि प्रदान गर्न सक्छ।
एन्डोक्रिनोलजिस्ट एक डाक्टर हो जो एन्डोक्राइन प्रणालीमा विशेषज्ञता दिन्छ। अर्को शब्दहरुमा, एक हर्मोन डाक्टर।
तपाईंको प्राथमिक हेरचाहले तपाईंलाई एंडोक्रिनोलोजिष्टलाई पठाउन सक्दछ यदि तपाईंको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कुनै रोगको कारणले भएको हो अन्तःस्रावी प्रणाली , जस्तै मधुमेह वा हाइपोगोनैडिजम (जब तपाईंको शरीरले पुरूष सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोनको पर्याप्त उत्पादन गर्दैन)।
यदि तपाईंको इरेक्टाइल डिसफंक्शनको कारण मधुमेह हो भने, एन्डोक्रिनोलोजिस्टले २ild, ,०, वा १०० मिलीग्राम सिल्डेनाफिलको खुराक लेख्न सक्छ।
यदि तपाईंसँग कम टेस्टोस्टेरोनको स्तर छ भने, एन्डोक्रिनोलजिस्टले तपाईंलाई हार्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापीमा सुरु गर्न सक्दछ।
सम्बन्धित: ईरेक्टाइल डिसफंक्शन उपचार र औषधिहरू
मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरहरूको बारेमा के छ?
एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरहरू, जस्तै सल्लाहकार, मनोवैज्ञानिक, वा मनोचिकित्सक, एक मनोवैज्ञानिक अवस्थाले तपाईको ED निम्त्याउँदैछ कि भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तिनीहरूले पनि यी सर्तहरूको उपचार गर्न सहयोग गर्दछ।
तपाईको इरेक्टाइल डिसफंक्शनको साथ संयोजनको रूपमा निम्न लक्षणहरू मध्ये कुनै पनि अनुभव गरिरहनु भएको छ भने तपाईको डाक्टरले तपाईलाई मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरलाई सिफारिश गर्न सक्दछ:
थकानको उच्च स्तर
डिप्रेसनका लक्षणहरू, ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाई हुनु, गतिविधिहरूमा चासो गुमाउनु, आत्महत्या विचारहरू, वा हर समय थकान महसुस सहित
सम्बन्ध समस्या र संचार मुद्दाहरू
थेरापिष्टहरूले तपाईको व्यक्तिगत जीवन, ईतिहास र सम्बन्धका बारे प्रश्नहरू सोध्नेछन्, कुनै मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको सीमा निर्धारण गर्न। तिनीहरूसँग तपाईंसँग एक प्रश्नावली पूर्ण पनि हुन सक्छ।
निदानमा भर पर्दै, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरहरूले मानसिक रोगको उपचार गर्न औषधि सिफारिस गर्न सक्छन्, जसले तपाईंको ED को लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। उनीहरूले जीवनशैली परिवर्तनहरू, जस्तै ध्यान, व्यायाम, र स्वच्छ खाना पनि सुझाव दिन सक्छन।
तपाईं कसरी इरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचार गर्नुहुन्छ?
इरेक्टाइल डिसफंक्शनका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय, पहिलो-लाइन थेरापी पर्चेको औषधि हो, जस्तो:
सिल्डेनाफिल ( भियाग्रा )
tadalafil (एडक्रिका, सियालिस )
vardenafil ( Levitra , Staxyn )
एभानाफिल ( Sendra )
सम्बन्धित: स्टेन्ड्रा बनाम भियाग्रा
के म सियालिस, भियग्रा, वा अन्य ईडी औषधीको लागि एक अनलाइन प्रिस्क्रिप्शन लिन सक्छु?
यदि तपाइँ ईडीको बारेमा तपाइँको डाक्टरसँग आमनेसामने कुरा गर्न असहज हुनुहुन्छ भने, धेरै क्लिनिकहरू र बीमा कम्पनीहरूले अनलाइन वा फोन-डाक्टर परामर्श प्रस्ताव गर्दछन् ताकि तपाईको पर्सनपत्र व्यक्तिगत रूपमा अफिसको भ्रमण बिना नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं आफ्नो औषधि अनलाइन खरीद गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, यो नक्कली ड्रग्स त्याग्न एक प्रतिष्ठित र प्रमाणित फार्मेसीबाट हो भनेर निश्चित हुनुहोस्।
इरेक्टाइल डिसफंक्शनको लागि उत्तम प्राकृतिक उपचार के हो?
मानिसहरूलाई लागी अर्को विकल्प लज्जित उनीहरूको यौन स्वास्थ्यको बारेमा उनीहरूको डाक्टरसँग कुरा गर्नु भनेको अत्यधिक-काउन्टर वा प्राकृतिक उपचारहरूको साथ शुरू गर्नु हो। यी केहि सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रभावकारी हुन् जुन पुरुषहरूले पहिले प्रयास गर्दछन्:
ईडी को लागी जीवन शैली परिवर्तन
अवैध औषधि र मदिरा सेवन घटाउँदै
सम्बन्ध मुद्दाहरू मार्फत काम गर्दै
तनाव कम गर्दै
ईडी को लागी प्राकृतिक उपचार
भिटामिन र पूरकहरू
सम्बन्धित : इरेक्टाइल डिसफंक्शनका लागि प्राकृतिक उपचार र उपचारहरूको लागि एक गाईड
उत्तम नतीजाहरूको लागि धेरै चिकित्सकहरूले यी केही प्राकृतिक उपचारहरूलाई प्रिस्क्रिप्सन औषधिसँग जोड्ने सल्लाह दिन्छन्।
अन्य उपचार विकल्पहरूले समावेश गर्दछ:
Penile रोपण र भ्याकुम उपकरणहरू
हर्मोन थेरापी र पेनाइल ईन्जेक्सन / सपोसिटरी (उदाहरण, alprostadil )
औषधि परिवर्तन गर्दै
Tricyclic antidepressants: उपयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी
Incruse Ellipta vs. Spiriva: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो
meloxicam 7.5 मिलीग्राम को साइड इफेक्ट के हो
सुख्खा खोकी को लागी एक राम्रो कफ सिरप
3 दिन पछि गोली काम पछि बिहान गर्छ
बाहिर पकेट अधिकतम र कटौती योग्य बीचको फरक
xyzal लाई काम गर्न कती समय लाग्छ?
अमेरिकामा कति मानिसहरु डिप्रेसनमा छन्